Mitambo yekubheja sekudyara | Ehupfumi Zvemari
Maitirwo azvino mumisika yezvemari, zvese zvakagadziriswa uye zvinowaniswa mari, zviri kutungamira vamwe varimari vashoma nepakati kuti vatsvage dzimwe nzira dzekuita kuti yavo inowanikwa mari ibatsire. Uye chimwe chazvo chakavakirwa pamitambo yekubheja senzira yekuvandudza ye mari yakawedzerwa makore ose. Nekudaro, uku kukanganisa kukuru kunoitwa nevashandisi ava nekuti chiitiko ichi hachigone kunzwisiswa sekudyara mune yechinyakare pfungwa yezwi iri. Kana zvisiri, pane kudaro, iwo mutambo uye hapana chimwezve.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa uye kana iwe ukatarisana nedambudziko rekusarudza yemadhijitari emitambo yekubheja chikuva chekudyara mari yako kuti iyi imwe nzira inogona kuburitsa chakakomba kubhejera kana kunyanyisa kuvimba pakubhejera. Mupfungwa iyi, iyo data yehurumende yeCommunity yeMadrid inonyatso kuratidza kuratidza kuti dzimba dzekubheja dziri kukwirisa. Uye navo kupindwa muropa neiyi mhando nyowani yemutambo iri kutungamira kumatambudziko ekubhejera kune vamwe vevashandisi.
Zvinoenderana neaya data, rudzi urwu rwezvivakwa rune yakakura 320% mumakore mashanu apfuura muMadrid, ichibva pa4.227 muna2013 kusvika pa17.735 2017 pakupera kwaXNUMX. Aya maitiro anogona kutumirwa kune dzimwe nzvimbo dzenyika. Tichifunga nezvechiitiko ichi, njodzi huru yezviitiko izvi kutora zviitiko zvekuvaraidza izvi sechikamu chekudyara. Nekuti kusiyana nemamwe mamodheru ekudyara mamodheru, mune ino iwe unogona kurasikirwa kunyangwe yekupedzisira euro. Ndokunge, zvese zvaunotamba kana kuisa mari mukufungidzira mumakwikwi emitambo akasiyana.
1 Mitambo yekubheja: misiyano yavo
2 Bettor Mbiri
3 Kupa kukuru uye kuwedzera
4 Ngozi muzviito
5 Mari kubva kubhizimusi rekubheja
6 Kumeso-kumeso uye mafomati epamhepo
Mitambo yekubheja: misiyano yavo
Kune zvakawanda zvakasiyana pakati pemitambo yekubheja uye mari mune chaiyo pfungwa yeshoko. Semuenzaniso, mhando iyi yemabheti akakosha anoenderana zvakanyanya netsaona uye kwete pakuongorora kwechigadzirwa kana mamodheru ekuchengetedza. Naizvozvo, inofanirwa kuita zvinopfuura mamwe marudzi emitambo inova chikamu chemufaro, zororo kana kutonakidzwa. Hazvishamise kuti muchikamu ichi hapana kukosha kana kunyangwe kudzidziswa kwemitengo. Ingori iyo kusiyanisa kwemari yemitambo kubheja icho chinhu icho panowana pundutso yemutambi inogara kune bettor.
Kune rimwe divi, zviratidzo zvakasiyana zvinoratidza kuti bhizimusi rekubhejera riri kutambanudza mapapiro aro mu dambudziko rehupfumi. Ndokunge, uine rakanyatso tsanangurwa mushandisi chimiro sezvo iri munhu ane matambudziko emari uye uyo anoedza kugadzirisa matambudziko avo nekufungidzira kwavo mune yemitambo chikamu kana kunyange zvimwe zviitiko zvekuvaraidza. Uyu mutsauko mudiki kana muhombe waunofanirwa kufunga nezvazvo kubva panguva ino zvichienda mberi. Nekuti uri kuisa njodzi yakawanda kana iwe ukatora mitambo yekubheja sekudyara. Huyai, ndoda kuzvienzanisa semuenzaniso, nekutenga uye kutengeswa kwemasheya mumisika yemari.
Mupfungwa iyi, iyo General Directorate yeMutemo weKubhejera, pasi peBazi rezveMari, inogadzirira mishumo yegore pamusoro pekambani nevatambi. Iyo nhoroondo inonyatsotsanangurwa: avhareji mutambi murume pakati pemakore gumi nemasere nemakumi mana nematatu, anogara nemumwe wake uye ane yakaderera mari chikamu uye zvidzidzo. Mune zvimwe zviitiko, ivo vanozvisarudza seimwe nzira kune zvigadzirwa zvakagadzirirwa kudyara kana kusimudzira kwekuchengetedza. Semuenzaniso, mari yekudyara, kutenga zvikamu, yakatarwa-temu bhangi dhipoziti kana maakaundi ane mari yepamusoro, pakati pezvimwe zvakakosha.
Izvo hazvigone kukanganwika kuti mumitambo yekubheja hapana yakatarwa kana yakavimbiswa kudzoka. Pasina nguva, kana zvisiri, pane zvinopesana, zvese zvinoenderana ne rombo rakanaka. Pasina mamwe mamiriro ekunze kana ekupedzisira. Nechikonzero ichi njodzi dzakakwirira uye dzinogona kukutungamira kuti usiye chikamu chakanaka chekuchengetedza kwako mukirasi yezvigadzirwa yakakosha uye ine njodzi panguva imwe chete. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
Kupa kukuru uye kuwedzera
Izvo zvinofanirwawo kutarisirwa kubva zvino zvichienda mberi kuti misika yakafukidzwa parizvino inenge isingaperi. Kwete chete kune ese marudzi ese emitambo zviitiko, asi kune zvimwe zviitiko kusvika nguva pfupi yadarika zvisina kuongororwa nemadhijitari epuratifomu eaya maitiro. Semuenzaniso, chess, kufambisa, snooker, padhaya, pakati pezvimwe zvakakosha. Sezvauchaona, mikana yacho yakakura uye nekudaro njodzi dzinokura zvinonzwisisika zvatova kumatanho anogona kunetsekana chikamu chikuru chevashandisi.
Kune rimwe divi, haina chete inopa vashandisi mukana wekubheja pamitambo, asi zvakare yakavhurika kune mimwe misika uye maitiro mumutambo. Semuyenzaniso, match yambiro, zvibodzwa zvemumwe mutambi, huwandu hwemakona, mukombe kana kuhwina muligi, timu inozoburitswa kana chero chiitiko chinoitika mune zvimwe zviitiko zvakarongwa pakarenda repasi rese. Zvese zviri nyore kubheja nevatengi vebhuki.
Chero zvazvingaitika, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kirasi iyi yemabasa haifanire kutorwa sechikamu chebato rekudyara. Kwete zvakanyanya kushoma nekuti zvinogona kutungamira kumatambudziko akakomba kubva zvino zvichienda mberi. Icho chikamu chezvinoitwa zvekuvaraidza zviitiko uye zvinoenderana nerombo kana dzimwe nguva kunyange mukana. Ichokwadi kuti iwe unogona kuwana mari yakawanda mukuita kunoitwa, pasina miganhu, uye zvichienderana nequota iyo bheji ine uye uyezve iyo huwandu hwakatambwa. Asi zvakare kurasikirwa nemari, kwete chete chikamu chayo, asi mune ino kesi inogona kunge iri huwandu hwese hunowanikwa muaccount.
Imwe yakaipa mhedzisiro yerudzi urwu rwechiitiko ndeyekuti inokurudzira kubhejera. Hazvishamise kuti, chimiro chevashandisi vanosarudza iyi mitambo ndeyevanhu vane matambudziko akakomba emari uye vanotarisira kugadzirisa matambudziko avo nerombo shoma kuburikidza nekubhejera kwavo pamitambo yakasiyana. Kusvika padanho rine kukahadzika kunogona kubata vanopfuura mumwe mushandisi sekuyambirwa nezviremera zvinotarisira kuona zvido zvevagari. Ichi chinhu chekufunga usati waisa yako yekutanga kubheja.
Mari kubva kubhizimusi rekubheja
Chero nzira, ichi chikamu chinotakura mamirioni ema euro mumaitiro ayo mazuva ese. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti bhizinesi remitambo mune zvese yakura kwegore rechitatu rakateedzana, sezvo mugore rekupedzisira mamirioni e9.408 euros akabhejerwa. Mukuita, chimiro ichi chinomiririra kuwedzera kunoyemurika kweanosvika 6% zvichienzaniswa negore rapfuura.
Kune rimwe divi, 94% inoenderana nechikamu chakatarisana-kumeso uye 6% kune chiitiko chepamhepo, ndiko kuti, kuburikidza nemapuratifomu ekubheja edhijitari. Nekudaro, kukura kwakanyanya kwave kuri mugero repamhepo, nekuwedzera kunoshamisa kwe30%, uye kuwedzera kwacho kwakafanana mumitambo yese, kunze kwemakwikwi uye poker. Sezvinoonekwa, iri chikamu chiri kuwedzera chiri pachena chisinganzwisise dambudziko rehupfumi. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinobatsirawo kubva pane izvi zviitiko zvakawandisa.
Kumeso-kumeso uye mafomati epamhepo
Kutarisana-ne-kumeso uye pamhepo kubheja mitambo Iwo ndiwo maitiro ekubhejera akakura zvakanyanya muSpain mugore rapfuura, pamwe neYO KAMWE marotari epapo. Ndichiri kune rimwe divi, makamuri emitambo Ivo vari munzvimbo yechitatu, nepo makasino nedzimba dzebingo dzichiramba dzakadzikama nekukura kudiki padyo ne4%. Kunyangwe imwe yedhata yakakosha pane ino nyowani mashandisirwo mukushandisa iri mune chokwadi chekuti kune vanhu vanopfuura zviuru mazana masere vanobheja mari pamhepo nguva nenguva kana zvakajairika. Seimwe yezvinyorwa zvikuru zvakaunzwa neichi chikamu musimba rakajeka mumakore achangopfuura.
Nepo kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kumeso-kumeso mitambo yekubheja yakura ne10%, asi kuwedzera uku kwakapfuurwa zvakanyanya nekuti nharaunda dzinoverengeka dzakavhura musika wavo mu2017, kunyanya muAsturias. Chero zvazvingaitika, idzi idata rakanyatso gadzikana munharaunda dzese dzakazvimirira dzehurumende, nemisiyano diki kubva kune imwe kuenda kune imwe. Iko, pakupedzisira, imwe yedhata yakakosha pane chikamu cheIndia kuti mugore rapfuura pakanga paine vanhu vanopfuura mamirioni matatu vakashanyira chero emahofisi e3.150 ekubhejera.
Mune zvimwe zviitiko zvekungonakidzwa chete, asi mune dzimwe nguva uchitsvaga imwe nzira yekudyara nechishuwo chekuita kuti mari yako ichengetedze nenzira inokurumidza uye inokurumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mitambo yekubheja sekudyara